Ciidamada AMISOM oo diyaarinaya qorshe lagu sugayo Amniga Goobaha Doorashooyinka Soomaaliya. | Dayniiile.com:-wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Ciidamada AMISOM oo diyaarinaya qorshe lagu sugayo Amniga Goobaha Doorashooyinka Soomaaliya.
Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa diyaariyay qorshe lagu sugayo ammaanka goobaha ay ka dhacayaan Doorashada Senatarada Aqalka Sare ee harsan & tan Golaha Shacabka BFS oo dhawaan lagu wado in ay bilaatabo.
Ururka Midowga Afrika oo bixiyay fasaxa Ciidamada ku howlgala AMISOM ayaa sheegay in askartooda ay diyaar u yihiin in ay dusha saartaan mas’uuliyadda nabadgalyada goobaha doorashooyinka ka dhacayaan iyaga oo la shaqeynaya Ciidanka Soomaaalida.
Xubno katirsan AU-da ayaa tilmaamay in kaalin weyn ay ka qaadanayaan qorshaha lagu xaqiijinayo dhameystirka Doorashooyinka labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka oo tan Aqalka Sare la doortay inta badan.
AMISOM ayaa 24-kii July 2021 soo bandhigtay 23-sarkaal oo mas’uul uga ah arrimaha Doorashooyinka Soomaaliya kuwaa oo laga soo dhex xulay Booliiska, waxa ay qaateen tababar ku filan halka ay aqoon kororsi siiyeen saraakiil Soomaali ah oo la shaqeynaysa.
Taliyaha Booliiska AMISOM Augustine Magnus Kailie oo la dardaarmay saraakiisha u qaabilsan ilaalinta goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka Labada Gole ee BFS ay ku heshiiyeen Madaxda Soomaalida waxa uu ka codsaday in ay gutaan mas’uuliyadda saaran.
Previous articleKumanaan qof oo ka qaxay dab ka holcaya koofurta Spain.
Next articleSIRTA DAAWADA BIDAARTA EE ANIGA II SHAQAYSAY …
Senator Muuse Suudi Yalaxow oo ku guuleystay kursiga 1-aad ee doorashada...
Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in Senator Muuse Suudi Yalaxow uu ku guuleystay kursiga 1-aad ee doorashada xubnaha Aqalka Sare ka soo...
Diyaarada Turki oo diiday in ay soo qaado Fahad oo soo...
Ciidamo isku hor fadhiya xarunta taliska ciidanka NISA ee gobalka Banaadir...
Wasiirka Arrimaha Dibadda dowladda Qatar oo booqasho ku tegay caasimada dalka...
Gabdho Somali ah oo mid ka mid ah la dhalatay Xildhibaan...
Madaxweynihii hore Soomaaliya Cabdi Qaasim Ayaa uga digay Farmaajo khilaafka”
Is-xasiliya ayaan leeyahay madaxda Qarankeena JFS gaar ahaan Pr. Farmaajo
Kenya oo laga dalbaday in ay war cad ka keento Muwaadin...